उपत्यका नगर पालिका संघ कर्फ्यु लगाई कडाइ गर्नुपर्ने निर्णय गर्छ उता सिडियोहरु खुकुलो निषेधाज्ञा जारी गर्छ ! - Subhay Postउपत्यका नगर पालिका संघ कर्फ्यु लगाई कडाइ गर्नुपर्ने निर्णय गर्छ उता सिडियोहरु खुकुलो निषेधाज्ञा जारी गर्छ ! - Subhay Post
उपत्यका नगर पालिका संघ कर्फ्यु लगाई कडाइ गर्नुपर्ने निर्णय गर्छ उता सिडियोहरु खुकुलो निषेधाज्ञा जारी गर्छ !
कसरी आउँछ अनि कोरोना नियन्त्रणमा ?
काठमाडौं / काठमाडौँ उपत्यकाका नगरपालिकाका मेयरहरूले १५ दिन कर्फ्यु लगाउन माग गरेका छन् । तर यसको विपरीत उपत्यकाका तीनै जिल्लाका सिडियोहरुले केही खुकुलो लगडाउन एक हप्ताका लागि जारी गरेको छ । स्थानीय सरकार कडाइ गरि रोग नियन्त्रणमा लिने प्रयासमा छ तर प्रशासन भने खुकुलो बनाउने तर्फ गएको स्पष्ट देखिन्छ । कोरोना संक्रमण फैलिएकाले दुई साता कफ्र्यु आदेश जारी गरी निषेधाज्ञा कडा बनाउनुपर्ने मेयर फोरमले सुझाव दिएको थियोे । मेयर फोरमका सचिव एवं मध्यपुर थिमि नगरपालिकाका मेयर मदनसुन्दर श्रेष्ठले फोरमको भर्चुअल बैठकले उपत्यकाका तीनवटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई कर्फ्यू आदेश जारी गर्न सुझाव दिएको बताए ।
उनले १५ दिनसम्म भएको निषेधाज्ञाको अवस्थामा संक्रमण फैलिन नपाएको र अझैपनि मानिसहरु बाहिर निस्कने काम भइराखेकाले यसलाई रोक्न संक्रमणलाई पूर्ण रुपमा नियन्त्रणमा लिन कर्फ्यु नै सबैभन्दा उत्तम विकल्प भएको जानकारी दिएका थिए ।
कोरोना भाइरस संक्रमण समुदाय स्तरमा फैलिइसकेको अवस्थामा मानिसहरुको आवागमनलाई पूर्ण रुपमा निषेध नगरीकन नियन्त्रणमा लिन कठिन हुने भन्दै उनले खालको निषेधाज्ञाबाट विपन्न वर्गहरुमा समस्या पर्नेतर्फ उपत्यका नगरपालिका मेयर फोरम सचेत रहेको बताएका थिए ।
यसैबीच उपत्यकाका तीनवटै जिल्लाका सिडिओले आज एक हप्ताका लागि निषेधाज्ञा थप गर्ने निर्णय गरेकाे छ । तर याे निषेधाज्ञा अहिले चलिरहेको निषेधाज्ञा भन्दा खुकुुलाे हुनेछ ।
बिहान ११ बजेसम्म अत्यावश्यकका पसलहरु खुल्ला रहनेछन् । ११ बजेसम्म सामान्य हिंडडुल गर्न सकिनेछ ।
यसरी जन प्रतिनिधि एउटा निर्णय गर्छन् सरकारी संयन्त्र अर्कै आदेश जारि गर्छ। अनि कसरी अाउँछ त काेराेना नियन्त्रणमा ?